Kuchema kwakaita pasi rose kwakaita kuti Trump achinje pfungwa dzake kuUS trophies trophies in
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Nhau Nhau » Kuchema kwakaita pasi rose kwakaita kuti Trump achinje pfungwa dzake kuUS trophies trophies in
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • vanhu • Kutarisirwa • Sports • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Zimbabwe Breaking News • Zimbabwe Breaking News
Vhiki rapera eTurboNews rakaburitsa chinyorwa pa US Kutenga mikombe yenzou kubva kuZimbabwe neZambia. Zvimwe zvakawanda zvinyorwa zvakaita seizvi muUS uye nhepfenyuro dzenyika dzese zvakaita kuti Mutungamiri weUS Donald Trump amire nemasangano akaita seConservation Action uye mazhinji e "manyepo enhau," uye achinje pfungwa dzake pamusoro penyaya - zvirinani izvozvi. Panguva imwecheteyo Zimbabwe parizvino iri kupinda mudambudziko renyika - saka nguva yacho yanga isina kukodzera.
Mutungamiri weAmerica, VaDonald Trump nemunyori mubazi rezvemukati menyika, VaRyan Zinke, vakamisa kudzoserwa kwechirango chekutorwa kwemikombe yekuvhima nzou kubva kuZimbabwe neZambia. Sarudzo inoerekana yaitika inotevera kuchema kwenyika uye kuratidzira kubva kumapoka ekodzero dzemhuka.
Chiziviso chakatanga kutumirwa tweet neMutungamiri weAmerica, achiti, “[Ini] ndakaisa sarudzo yemukombe mukuru kusvikira nguva yandinoongorora zvese zvekuchengetedza. Pasi pekudzidza kwemakore. Ndichagadzirisa munguva pfupi na Secretary Zinke. Ndatenda!"
Mazuva maviri chete zvisati zvaitika, iyo United States 'Hove neWildlife Service (USFWS) yakabvisa kurambidzwa kuunza mikombe yenzou, vachitaura kuti vachawedzera mabasa ekusimudzira kuvhima mukombe senzira yekuchengetedza.
Kudzoreredzwa kwekurambidzwa kweMutungamiriri wenyika VaObama muna 2014 kwakashoropodzwa se “danho rekudzokera kumashure kwekuedza kuchengetedza tsika,” neThe David Sheldrick Wildlife Trust, pakati pevamwe, kunyanya tichifunga nezve nzou dzeAfrica dzakatyisidzirwa
Vakuru vezvekuchengetedza pasi rose vakatya kuti zvaizokanganisa simba repasirese mukupedza kutengeserana kwenyanga dzenzou nekuuraya vanhu. VaWayne Pacelle, The Humane Society yemutungamiriri weUnited States uye CEO vakati kudzosera mukombe pamwe nemitemo yekuunza kunze kwenzou "inzira uye yakaipa, yekubhadhara-kuuraya iyo Zimbabwe yakagadzira neindasitiri yekuvhima mukombe."
Jeff Chrisfield, CEO weAfrican Wildlife Foundation akaudzawo The Guardian kuti US anga ari mutungamiri wepasirese mukurwira kudzora kuderera kune njodzi pakati pemhando dzemhando dze Africa, uye kuti zvaizosuruvarisa kana hutungamiriri hwaTrump hukapa hutungamiriri uhu.
Chiziviso chakarova huta pasi rese, pamwe nevanhu vakakurumbira vachitaura. Zuva mushure memashoko, Ellen DeGeneres akazivisa kuti anga achivhura mari yekutsigira nzou, iyo yaanoti inoratidza "tsitsi, kunzwira tsitsi, ruzivo rwemagariro, kuzviziva… zvinhu zvese zvandisati ndaona mumutungamiri wenyika uyu."
The Leonardo DiCaprio Foundation Zvakare, kunzi kurambidzwa kuchinjisa danho "rakashata" rinozoita kuti US irasikirwe ne "chinzvimbo chehutungamiriri hwepasi rose mukugumisa kutengeserana kwenzou".
Mubvunzurudzo yakatevera chiziviso chekudzora chirambidzo, Iain Douglas-Hamilton, muvambi uye musayendisiti mukuru kuNairobi-based Save the Elephants, akati zvakashamisa kuti vanhu vemuAfrica vari kunzi havauraye nzou, nepo vapfumi vekuAmerica vari kubvumidzwa kuuya kuzochiita.
Muna 2014, USFWS yakashandisa kurambidzwa kwekutenga kunze kwenyika zvichinzi Zimbabwe yakanga yakundikana kubata nzou dzayo zvine mutsindo. Uye kuenderera kwekushomeka kwemitemo yemhuka dzesango kwakashoropodzwa zvakanyanya muZim. Gore rakapera chete, nyika yakadzivirirwa kuburitsa vana nzou vanobatwa musango, dzimwe dzadzo dzakafira pakuenda kunzvimbo inochengeterwa mhuka kuChina. Gore rakapfuura, kuchema kwenyika kwakatevera mushure meumwe wevanodiwa uye vakanyatsodzidza Shumba dzemuAfrica, Cecil, akaburitswa mupaka yenyika ndokupfurwa nemuvhimi weUS.
Iko USFWS kufunga kwekudzosera chirango kunoshandawo kune mikombe kubva kuZambia, uko, sekureva kwe Kuverenga kukuru kwenzou, nzou yakadonha kubva kunzou dzinopfuura mazana maviri ezviuru muna 200 kusvika pashoma pashoma 000 1972 muna 21.
Maererano ne The Washington Post, USFWS yanga ichiongororawo kuti ibvumidze here kutapa mukombe wenzou kubva kuTanzania, uko kuuraya vanhu zvakawandisa uye nhamba dzenzou dzakadzikira zvakanyanya mumakumi emakore apfuura.
MuZimbabwe, huwandu hwenzou hwakadzikira ne6% kubva muna 2001.
Sekureva kweHSUS, hurongwa hwekubata nzou muZimbabwe huchiri kukanganisa zvakanyanya, nekuvhima, huwori uye kushaikwa kwehurumende kutsigira mabasa ekuchengetedza. Sangano rakatambira danho raTrump rekuti 'riongorore chokwadi chose chekuchengetedza', richiti "urwu ndirwo rudzi rwekutengesa rwatisingade."